Izindaba - Ibhizinisi lethu lokumboza izwe selivele lingene esigungwini semakethe ukulwela impi
Izwe lethu lokumboza ibhizinisi selivele lingene esigungwini semakethe ukulwela impi
Inzuzo ingumgomo wokugcina wenkampani yopende, kepha kulo makethe wokuncintisana wopende, ungama kanjani? Lokho ngukuqonda ukuthuthuka komkhakha nesimo esikhona, ukwenza izinyathelo nokulungiselela okuhlukahlukene, ukubhekana nezinselelo ezintsha, wandise ukuncintisana kwabo.
Amanye amabhizinisi wokumboza ezweni lethu angene empini yesikhungo semakethe
Njengoba ukuncintisana kwemakethe yokumboza kukhula ngokwengeziwe, ukuthengiswa kwenethiwekhi kuya ngokushintsha kwenzuzo okuncane kakhulu, umenzeli wesifundazwe osekelwa yibhizinisi lokuqala ngamandla angaphenduka abe yilinye i-ejenti lomkhiqizo wokumboza nganoma yisiphi isikhathi. Ngakho-ke, amabhizinisi amaningi wokumboza awakagxili kuphela ekuthengisweni kwenethiwekhi ngaphezulu, kepha ukwakhiwa kwethimba lezentuthuko, ukuthuthukiswa kwamakhasimende weqoqo lezimboni. Kulo nyaka amabhizinisi amaningi kapende ayenzeka ngokuqondana emizamweni yeziteshi zokumaketha. Abadlula ngokudlula, ababhekene ngqo namakhasimende, amabhizinisi kapende eShandong aya ngokwanda ukuthatha isu lokuthengisa. Impi yesikhungo sokupenda iyaqhubeka.
Ukuze kusizakale ukucwila kwesiteshi, umuntu ophethe amabhizinisi amaningi opende ufinyelele esivumelwaneni - anganciphisa ngempumelelo isixhumanisi sokusakaza, asheshise inzuzo engenayo, futhi anganikeza ikhasimende ekugcineni isikhala esiningi senzuzo; Kunganciphisa amandla enkulumo yabathengisi futhi kuqinise ukulawulwa kwezimakethe kwamabhizinisi. Ukubhekana ngqo namabhizinisi opende, kungabuye kucindezele indawo yokuhlala kapende oyimbumbulu futhi ophansi, kuqhubeke kuqondiswe ukuhleleka komncintiswano wezimakethe, kugcinwe izintshisekelo ezibalulekile zamabhizinisi kapende, futhi kusungulwe futhi kwandiswe ithonya lomkhiqizo.
Imakethe yepende izoletha ukuqeda amandla eminyakeni emi-3 kuya kwengu-5
Imboni yokumboza "izimbali eziyikhulu ziyaqhakaza", imvamisa ithi kunamabhizinisi ayizinkulungwane eziyisishiyagalombili, ngaphezu kwama-brand ayizinkulungwane eziyishumi. Ngokombono wejika lokuthuthuka, isikhathi sokuthuthuka segolide semboni yokumboza sidlulile. Izindleko ezikhuphukayo, imishini ebuyela emuva, ukuncintisana okunamandla kwemakethe nezinye izinto kuholele ekuvalweni kwezinkampani eziningi nabasabalalisi bezinto ezincane. Yize kungenzeki ukubheka ngokunembile ukuthi zingaki izinkampani zokumboza nemikhiqizo ekhona, kodwa kuqinisekile ukuthi isigaba sokususwa kwemboni yokumboza sesiqalile ukuqala.
Umzila wokuthengisa wenkampani yokumboza uqala kusukela ekuqaleni kwekhulu lama-21 kuze kube manje, wethula umkhuba wokubamba ngaso sonke isikhathi, umenzi ulungisa ngokungapheli kumthengisi ojwayelekile wesifundazwe nakumthengisi wezinga lomuzi futhi anciphise indawo yokuthengisa, zama ukuthuthukisa inethiwekhi ethe xaxa, thuthukisa abathengisi abaningi ukuze babambisane ngqo nenkampani. Ezitolo zokugcina, imodi yezitolo ezikhethekile nezitolo ezinkulu iyanqoba, ngenkathi ukusebenza kokudla / izitolo ezincane kunzima. Abanye abakhiqizi baqala ukukhuthaza izitolo ezintsha, ngomzamo wokuthuthukisa ukuncintisana kwabathengisi nemikhiqizo esikhumulweni. Ukuphathwa kwabathengisi nokuqwashisa ngezindleko kwaqala ukuqinisa kancane kancane, ukuthembela emandleni abakhiqizi, ukuthuthukisa izinga labo lokunyusa kanye namakhono okuthengisa, ukuze kuthuthukiswe umhlaba owengeziwe.